မြင်သူတကာ လည်ပြန်ငေးခဲ့ရတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ​ဖွေးဖွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေ – XB Media Myanmar
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အလှဆုံးသော မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီဖွေးဖွေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်တာကြောင့်ရော၊ နူးညံ့လွန်းတဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဖွေးဖွေးက SAMSUNG Galaxy S 10 မိတ်ဆက်ပွဲကို ထူးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အမိုက်စားတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ တောက်ပပြီးထင်ရှားနေတဲ့ ဖွေးစိန်လေးကိုတော့ ပွဲတက်လာသူတွေအကုန်လုံးက လည်ပြန်ငေးယူခဲ့ကြရတာပါ။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အမှောင်ထဲမှာ တောက်ပနေတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ အမိုက်စားပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖွေးဖွေးကတော့ “I am “Glow in The Dark Bae” 💙💙💙💙💙🙃💙💙💙💙 Do What You Can’t!!! @ SAMSUNG Galaxy S 10 Launch ! ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။
အဆိုပါပွဲကိုတော့ ဖွေးဖွေးအပြင် တစ်ခြားသော နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေအများကြီးကလည်း တက်ရောက်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ လတ်တလောမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီး၊ event ပွဲတွေလည်း တက်ရောက်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ ဒီနှစ်မှာလည်း အကယ်ဒမီရဖို့ ပရိသတ်တွေတစ်ကြိုပေးခြင်းကို ခံထားရသူလေးပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း တောက်ပလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ အမိုက်စားပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို သဘောကျရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။